Saddexda ilaah ee ugu waaweyn Hinduuga | Safarka Absolut
Saddexda ilaah ee ugu waaweyn ee Hinduuga
Daniel | | Hindiya
El Hinduuga Waa mid ka mid ah diimaha ugu faca weyn adduunka, oo ay ku dhaqmaan in ka badan 1.100 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Aasiya iyo qaybaha kale ee adduunka. Daaran India, Pakistan, Nepal, Bangladesh iyo Malaysia waxaa jira dad badan oo raacda qawaaniinteeda oo caabuda saddexda ilaah ee ugu waaweyn Hinduuga.
Si ka duwan diimaha kale, ilaahyadan waxaa lagu caabudaa nolol maalmeedka. In ka badan dad aan la taaban karin oo fog, waxaa loo arkaa inay yihiin tirooyin qayb ka ah xaqiiqada maalin kasta. Waxaa jira qulqulatooyin badan iyo iskuulo ku dhex jira Hinduuga.
Pantheon-ka kala geddisan ee Hinduuga, ilaahyada oo dhami isku nooc ma aha. Ma jiraan wax ka yar soddon milyan oo ilaahyo, laakiin dhammaantood ma ahan kuwo isku mid muhiim ah oo la ixtiraamo.
Kuwani waa saddexda ilaahyada ugu waaweyn ee Hinduuga: Brahma, Vishnu iyo Shiva. Waxay sameystaan Trimurti ("Saddexda qaab" ee Sanskrit) waxayna u taagan yihiin siday u kala horreeyaan wareegyada abuurista, dhawrista iyo burburka koonka.
Sida laga soo xigtay dhaqanka diinta Hindu, Brahma Isagu waa ilaahii abuuraha ee Caalamka. Wax kasta oo adduunka ka jira waa wax qabadkiisa. Waxay astaan ​​u tahay xikmadda iyo garaadka.
Brahma waxay leedahay laba naagood: Saraswati, ilaahadda aqoonta, iyo Savitri, oo ah gabadha ilaaha qorraxda, sidoo kale waa aabaha Dharma (abuuraha ilaaha diinta) iyo kan Attri. Intaa waxaa dheer, isagu waa aabaha toban wiil iyo gabar ay ka soo wada jeedaan jinsiyadaha kala duwan ee aadanaha.
Sida dhaqanku sheegayo, hoygiisu waa ku yaal Brahmapura, magaalo rabaani ah oo ku taal xagga sare Buurta Meru, taas oo dhinaca kale loo arko inay tahay bartamaha adduunka.
Matalaadda Brahma, ilaahii abuuray ee Caalamka ee Hinduuga
La matalaad astaan ​​u ah Brahma Waa tii oday maqaar cas oo afar madax gadh leh leh. Garkaas cad waxay xambaarsan yihiin xigmad. Mid kasta oo afkeeda ka mid ahi wuxuu akhrinayaa mid ka mid ah afarta Veda ama qoraallada xurmada leh. Waxa kale oo uu leeyahay afar gacmood oo gacmahoodu ku hayaan waxyaabo kala duwan:
Weel biyo ah, isha nolosha.
Xadhig kuul (yapa mala) in la tiriyo da'da Caalamka.
Qoraal ka yimid Vedas.
Brahma wuxuu ka muuqdaa farshaxanno iyo sawirro badan oo xagga dambe ah Swan weyn oo loo yaqaan Jansa, Shimbir rabaani ah oo kuu oggolaaneysa inaad ku safarto dhererka iyo ballaca Caalamka.
Xamaasad ahaan, waa in la ogaadaa in Brahma sidoo kale ay tahay sumacad caan ah oo caan ku ah Hindiya. Dad badan ayaa caba iyada oo aan tan loo arkin inay tahay wax xaaraan ah.
Haddii Brahma uu yahay ilaah abuure, Hinduuga ayaa tixgelinaya Vishnu sida ilaah ilaaliya. Isagu waa ilaaliyaha amarka, nabadda iyo jacaylka Caalamka. Isagu waa ilaah xoog badan oo wanaag ka buuxo, awoodna u leh inuu ka shaqeeyo waxyaalaha ugu yaabka badan ee aan la malayn karin iyo inuu aad ula dagaallamo oo naxariis daro jinniyo iyo shayaadiin.
Dhaqan ahaan, Vishnu gurigiisa wuxuu ku yaal meel la yiraahdo Vaikhunta, oo ku taal meel sare oo cirka ka sareysa Himalayas. Ku qaatid, Webiga weyn ee muqaddaska ah ee Hindiya, ayaa cagihiisa ka kaca. Vishnu waa guursaday Lakshmi, ilaahadda quruxda iyo nasiibku.
Matalaadda caadiga ah ee Vishnu waa tan muuqaalka aadanaha, maqaar buluug ah oo leh afar gacmood. Laabtiisa waxaa ku yaal quful timo cad ah. Sida Brahma, wuxuu kaloo leeyahay afar astaamood oo uu ku haysto mid kasta oo ka mid ah afarta gacmood:
Qolof dhalo ah (shanká) oo mar la dhawaajiyay guushii militari ka dib.
Jaantus dahab ah oo Vishnu uu ku burburiyo madaxa jinniyada.
Giraan aad u fiiqan oo bir ah (Sudarshana chakra) inuu u adeegsado gawraca jinka.
Vishnu waxaa badanaa la arkaa isagoo fadhiya mid weyn ubax lotus oo uu weheliyo Laksmi, oo dhabta ku jiifa.
Xubinta saddexaad ee Trimurti waa Shiva, ilaah wax baabi'iya. In kasta oo Vishnu u taagan yahay bilowga nolosha, Shiva wuxuu astaan ​​u yahay dhammaadka. Doorkeeda ayaa aasaas u ah Hinduuga dhexdiisa, halkaas oo dhimashadu ay lagama maarmaan u tahay marka hore soo bixitaanka. Taasi waa sababta aan loo tixgelin inuu yahay ilaah shar ah, wax iska soo horjeedna.
Naanaysyadiisa qaar ka mid ah waa "kuwa laga cabsado" ama "kan farxad bixiya." Isaguna waa ilaaha qoob-ka-ciyaarka, sidaa darteed muusigga iyo qoob-ka-ciyaarku waxay muhiimad weyn ku leeyihiin xafladaha iyo caadooyinka ku xeeran shakhsigiisa.
Xaaska Shiva waa ilaahadda Parvati, oo uu u lahaa saddex carruur ah: Aiapa, Ghanesa iyo Kartikeia, Ilaahow Dagaal. Hoyga Shiva wuxuu ku yaalaa Mount kailash, oo hadda ku sugan dhulka Shiinaha.
Taallo weyn oo Shiva ah oo ku dhex taal macbadka Hinduuga
Sawirka caadiga ah ee Shiva ayaa ah yogi midab buluug ah leh oo mararka qaarkood lagu sawiray isagoo fadhiya meel feker ah iyo waqtiyo kale oo qoob-ka-ciyaaraya mid ka mid ah labadiisa lugood hawada. Hareeraha qoortiisa a abeeso taasi waxay astaan ​​u tahay tamarta muhiimka ah.
Waxay leedahay saddex indhood, midkood ayaa ku yaalo wejiga. Indhahan saddexaad waxay metelaan diyaaradda ruuxiga ah, in kasta oo sida dhaqamada kale ay dhigayaan ay saddexda indhood astaan ​​u yihiin saddexda qaybood ee waqtiga: hore, hadda iyo mustaqbalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Saddexda ilaah ee ugu waaweyn ee Hinduuga
Shaqooyinka sayidka Alejandro Obregón
Halyeey sixir ah oo ka dhacay biyo-dhaca Churumbelo